तपाईँको सेन्चुरी बैङ्कमा खाता छ ? जेल जानुहोला नी ! – Sandesh Press
November 20, 2021 195
सेन्चुरी कर्मसियल बैङ्कका एक ग्राहक बैङ्कको बदमासीका कारण प्रहरीको चिसो कस्टडीमा बस्न बाध्य भएका छन् । बैङ्कको सुनसरी स्थित चतरा शाखाका ग्राहकको सोझोपनका कारण प्रहरीको कस्टडीमा बास भएको छ ।
सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिकामा बस्ने पंकज न्यौपानेलाई वित्तीय अपराध गरेको भन्दै पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । बैङ्कको कर्मचारीलाई विश्वास गरेका कारण उनी विगत ८ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् ।
पंकज पक्राउ पर्नुको मुख्य अपराध उनले सेन्चुरी कर्मसियल बैङ्कमा खाता खोल्नु रहेको उनको परिवारले जनाएको छ । बैङ्कमा खाता खोलेर राम्रै कारोबार गरिरहेका उनीमाथि बैङ्कका कर्मचारीको आँखा पर्‍यो । हेर्दा, सोझो र इमानदार देखिएका पंकजसँग बैङ्कका कर्मचारीले सम्बन्ध बढाए ।
कर्मचारीसँगको त्यही संगतले उनलाई प्रहरी हिरासतसम्म पुर्याएको छ । यो घटना हालसालैको हो । बैङ्कको चतरा शाखामै पार्वती विष्टको पनि खाता छ । उनको खातामा विदेशबाट ठूलो मात्रामा रकम जम्मा भयो, ठूलो मात्रामा रकम जम्मा भएको बैङ्कका कर्मचारी केशव राईले जानकारी पाए ।
पैसा जम्मा भएको दिन पंकजसँग उनको भेट भयो । भेटमा राईले पंकजसँग उनको चेक मागे र खाली चेकमा हस्ताक्षर गर्न लगाए । सोझा पंकजले पनि खातामा पैसा नभएको भन्दै चेक दिन इनकार गरे ।
‘मेरो विदेशबाट पैसा आउँदै छ । तपाईँको खातामा जम्मा गर्न भन्छु । त्यसपछि कति पैसा आउँछ निकालौला । पैसा आउला, तपाईँलाई खोजेर नभेटौँला । मलाई यति सानो सहयोग गर्नुहोस् है पंकजजी’ भन्दै चेक मागेको पंकजको भनाई उदृढ गर्दै प्रहरी श्रोतले भन्यो । प्रहरीसँगको बयानमा आफूलाई पैसा जम्मा भएको, झिकेको केही पनि जानकारी नभएको बताएका छन् ।
मेरो खातामा पनि पैसा छैन भन्ने भयो । पैसा जम्मा हुँदा र झिक्दा के हुन्छ र भन्ने भएपछि मैले चेक दिएको हुँ’, प्रहरीसँगको बयानमा उनले भनेका छन् ।
खातामा पैसा नभएको हस्ताक्षरसहितको चेक प्राप्त गरिसकेपछि राईले विष्टको खातामा जम्मा भएको ४२ लाख रुपैयाँ पंकजको खातामा जम्मा गरे । र उक्त रकम दुई पटक गरी पंकजको खाताबाट चेकमार्फत निकाले ।
सेन्चुरी बैङ्क चतरा शाखाका शाखा प्रबन्धक तीर्थमणि काफ्लेले कर्मचारीको बदमासीका कारण निर्दोष व्यक्तिले दुःख पाएको स्वीकारेका छन् । ‘पंकज हामीले निकै नजिकबाट चिनेको व्यक्ति हो । उहाँलाई अनावश्यक रूपमा फसाइएको छ ।’ उनले भने, ‘हामीले यो केशमा उहाँको संलग्नता नभएको बताइसकेका छौँ ।’
प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेकाले यस विषयमा केही पनि बोल्न नमिल्ने बताएको छ । ‘उहाँहरू दुई जनाको नाममा उजुरी परेको छ ।’ इलाका प्रहरी कार्यालय चतराका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक पाण्डव राजवंशीले भने, ‘हामीले अनुसन्धानका लागि राखेका छौँ । अनुसन्धान भइरहेको छ । यस विषयमा धेरै बोल्न मिल्दैन ।’
बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालयले यस विषयमा जानकारी भएको जनाएको छ । ‘पत्रिकामा समाचार आएपछि हामीलाई पनि जानकारी भएको छ । हाम्रै कर्मचारीले बदमासी गरेको भन्ने छ ।’ बैङ्कका ब्रान्ड तथा सिएसआर प्रमुख गणेश सुवेदीले भने, ‘अरू विषय मलाई जानकारी छैन । उहाँलाई कारबाही गरेको भन्ने पनि छ । तर कहिले र कुन तहको कारबाही हो मलाई जानकारी छैन ।’
बैङ्कका सूचना अधिकारी राजेश भण्डारीले यस विषयमा बुझ्न बारम्बार टेलिफोन गर्दा फोन उठाएनन् । फोन नउठेपछि उनलाई भेट्न कार्यालयमा पुग्दा पनि उनी भेटिएनन् । यो विषयलाई बैङ्कले गुपचुप राख्दै कर्मचारीको बचाउ गर्न खोजेको भण्डारीको व्यवहारले पुष्टि गरेको छ ।
Prevअभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ र प्रेमी दावा स्टिभन शेर्पाको बीच ब्रेकअप
Nextमासिक साढे दुई लाख तलब दिने गरि १० हजार नेपाली नर्सलाइ बेलायतले लैजाने
पी’डितलाई उस्काएर जाहेरी दिन लगाएको आरोप लागेका दुर्गेशले दिए यस्तो बयान-
के जुत्ता-चप्पल उल्टो देख्दा सुल्ट्याउने गर्नुभएको छ तपाईले ? उल्टो चप्पलले गर्छ यस्तो संकेत